Ragga Africa Iyo Gabdhaha Reer Yurub Maxaa Kala Heysta | Salaan Media
Ragga Africa Iyo Gabdhaha Reer Yurub Maxaa Kala Heysta
Waxaa sanadba sanadka kadambeeya sii kordhaya tirada dadka African ka ah ee tagaya qaarada yurub rag iyo damarba.
Tani waxaa ay dhaxal siisay in ay ku dhexmilmaan bulshada reer yurub dhan kasta. Jariirada Bild ee kasoo baxda Jarmalka ayaa warbixin ay soo qortay waxaa ay kusheegtay in haweenka Jarmalku ay aad ujeclaadeen in ay guursadaan raga madowga ah ee kasoo jeeda Africa.
Sida ay warbixintu sheegeyso sadexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay haweenka Jarmalka ah ee guursanaya raga Africa. Isku cel celis ahaan tiro koob lasameeyay ayaa muujinaya in inkabadan 837 gabdhood oo jarmal ah ay guursadeen rag African ah mudo 28 bilood ah.
Warbixintaan ayaa lagu sheegay in sababta ugu badan ee arintaan xoojineysa in ay tahay raga Africanka ah oo aan badi furin dumarka reer yurub xitaa hadii ay kusameeyaan wax yaabo ay dhibsanayan isla markaana ay dulqaad badanyihiin. Isla warbixintaan ayaa lagu sheegay in dhanka kale haweenka Africanka ah ay fursad kaheleen raga udhashay wadanka PolandWiilasha cad cad ee wadanka Poland ayaa lasheegay in ay aad ujecelyihiin in ay lanoolaadaan oo ay guursadaan gabdhaha kasoo jeeda qaarada Africa waxaana lasheegay in uu wadankasi hogaaminayo guursiga gabdhaha madow ee qaarada Africa marka laga hadlaayo wadamada kuyaala qaarada yurub.